ORCA Diiwaangelinta Kaarka Soo-kabashada - Othello iyo Rainier Beach Survey
ORCA Diiwaangelinta Kaarka Soo-kabashada - Othello iyo Rainier Beach
Macluumaadka lagu bixiyay sahankan waxaa loo tixgaliyaa diiwaan dadweyne waxaana laga yaabaa inay ku xiran tahay siidaynta dadweynaha. Wixii macluumaad dheeraad ah, eeg Xeerka Diiwaanka Dadweynaha, RCW Cutubka 42.56. Si aad wax badan uga barato sida aan u maamulno macluumaadkaaga, arag Bayaanka Qarsoonnimadayada.
Haddii goobtaada shaqadu ay ku taal Othello ama Rainier Beach, waxaad buuxin kartaa foomka diiwaangelinta soo socda si aad u hesho kaarka ORCA ee bilaashka ah. Haddii aad u qalanto, waxaanu kuugu soo diri doonaa kaar goobtaada shaqada. Macluumaadkaaga lama wadaagi doono waxaana loo isticmaali doonaa qiimaynta barnaamijka iyo abaabulka oo keliya. Macluumaad dheeraad ah iyo shuruudaha u-qalmitaanka, booqo ORCA bogga internetka ee Kaarka Soo-kabashada.
* 1. Waa maxay magacaaga oo dhameystiran?
* 2. Waa maxay iimaylkaagu? Waxa laga yaabaa inaan tan u isticmaalno si aan kula soo xiriirno macluumaadka ku saabsan kaarka soo kabashada.
* 3. Waa maxay lambarka taleefankaagu? Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno kan si aan kula soo xiriirno macluumaadka ku saabsan kaarka soo kabashada.
* 4. Xagee ka shaqeysaa (ku qor magaca goobtaada shaqada)
Su'aalaha soo socdaa waxay ku weydiinayaan caadooyinka safarkaaga hadda. Jawaabahaagu waxay naga caawin doonaan inaan fahanno saamaynta Kaarka Soo-kabashada ORCA. Jawaabahaaga su'aalahan saameyn kuma yeelan doonaan u-qalmitaankaaga Kaarka Soo-kabashada ORCA.
* 5. Sideed inta badan u bixisaa kharashka gaadiidka?
Waxaan ku bixiyaa qiimo buuxa ($2.75) kaarka ORCA
Waxaan ku bixiyaa kaarka ORCA ee la kabo (sida LIFT, RRFP, ama kaarka dhalinyarada)
Waxaan ku bixiyaa lacag caddaan ah
Ma qaato ama dhif ayaa qaata gaadiidka dadweynaha
* 6. Toddobaadka caadiga ah, imisa jeer ayaad raacdaa gaadiidka dadweynaha?
* 7. Markaad ka fikirto caadooyinka safarkaaga hadda, fadlan calaamadee inta aad ku raacsan tahay weerahan soo socda:
Aad ugu raacsan Ku raacsan Dhexdhexaad Khilaafsan Aad u khilaafsan
Way fududahay in loo safro oo laga soo noqdo shaqada
Way fududahay in loo safro oo laga soo noqdo shaqada Aad ugu raacsan
Way fududahay in loo safro oo laga soo noqdo shaqada Ku raacsan
Way fududahay in loo safro oo laga soo noqdo shaqada Dhexdhexaad
Way fududahay in loo safro oo laga soo noqdo shaqada Khilaafsan
Way fududahay in loo safro oo laga soo noqdo shaqada Aad u khilaafsan
Gaadiidka dadweynaha waa mid la awoodi karo
Gaadiidka dadweynaha waa mid la awoodi karo Aad ugu raacsan
Gaadiidka dadweynaha waa mid la awoodi karo Ku raacsan
Gaadiidka dadweynaha waa mid la awoodi karo Dhexdhexaad
Gaadiidka dadweynaha waa mid la awoodi karo Khilaafsan
Gaadiidka dadweynaha waa mid la awoodi karo Aad u khilaafsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u shaqeeyo
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u shaqeeyo Aad ugu raacsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u shaqeeyo Ku raacsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u shaqeeyo Dhexdhexaad
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u shaqeeyo Khilaafsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u shaqeeyo Aad u khilaafsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan ugu tago meelaha aan shaqada ahayn ee nolol maalmeedka (dukaamada cuntada, dugsiga, ballamaha caafimaadka, iwm.
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan ugu tago meelaha aan shaqada ahayn ee nolol maalmeedka (dukaamada cuntada, dugsiga, ballamaha caafimaadka, iwm. Aad ugu raacsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan ugu tago meelaha aan shaqada ahayn ee nolol maalmeedka (dukaamada cuntada, dugsiga, ballamaha caafimaadka, iwm. Ku raacsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan ugu tago meelaha aan shaqada ahayn ee nolol maalmeedka (dukaamada cuntada, dugsiga, ballamaha caafimaadka, iwm. Dhexdhexaad
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan ugu tago meelaha aan shaqada ahayn ee nolol maalmeedka (dukaamada cuntada, dugsiga, ballamaha caafimaadka, iwm. Khilaafsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan ugu tago meelaha aan shaqada ahayn ee nolol maalmeedka (dukaamada cuntada, dugsiga, ballamaha caafimaadka, iwm. Aad u khilaafsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u tago meelaha firaaqada ah jardiinooyinka, si aan u arko asxaabta iyo qoyska, iwm.)
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u tago meelaha firaaqada ah jardiinooyinka, si aan u arko asxaabta iyo qoyska, iwm.) Aad ugu raacsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u tago meelaha firaaqada ah jardiinooyinka, si aan u arko asxaabta iyo qoyska, iwm.) Ku raacsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u tago meelaha firaaqada ah jardiinooyinka, si aan u arko asxaabta iyo qoyska, iwm.) Dhexdhexaad
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u tago meelaha firaaqada ah jardiinooyinka, si aan u arko asxaabta iyo qoyska, iwm.) Khilaafsan
Waxaan isticmaalaa gaadiidka dadweynaha si aan u tago meelaha firaaqada ah jardiinooyinka, si aan u arko asxaabta iyo qoyska, iwm.) Aad u khilaafsan
Gaadiidka dadweynaha ayaa ah ikhtiyaarka gaadiidka aan doorbido
Gaadiidka dadweynaha ayaa ah ikhtiyaarka gaadiidka aan doorbido Aad ugu raacsan
Gaadiidka dadweynaha ayaa ah ikhtiyaarka gaadiidka aan doorbido Ku raacsan
Gaadiidka dadweynaha ayaa ah ikhtiyaarka gaadiidka aan doorbido Dhexdhexaad
Gaadiidka dadweynaha ayaa ah ikhtiyaarka gaadiidka aan doorbido Khilaafsan
Gaadiidka dadweynaha ayaa ah ikhtiyaarka gaadiidka aan doorbido Aad u khilaafsan